I-Consumer Electronics - IPandawill Technology Co., Ltd
Ama-elektroniki wabathengi, kusuka kumikhiqizo yomsindo kuya kokugqokekayo, ukugembula noma iqiniso langempela, konke kuya ngokuya kuxhuma. Umhlaba wedijithali esiphila kuwo udinga izinga eliphezulu lokuxhuma ne-elekthronikhi ethuthukile namakhono, ngisho nakwemikhiqizo elula kunazo zonke, inika abasebenzisi amandla emhlabeni jikelele.
EPandawill, siletha izixazululo eziphezulu zokukhiqiza elektroniki zabathengi, kusuka ekwakhiweni, ezobunjiniyela, nasekukhiqizweni, ekukhiqizweni ngobuningi nasezixazululweni zomkhiqizo wokugcina kuze kube sekupheleni.
Njengenkampani yokukhiqiza inkontileka kagesi, sinikela ngezinsizakalo ezigcwele zethkey kusuka ezinsizakalweni zokwakha ukuhlehlisa ukuphathwa kobunjiniyela nokuphelelwa yisikhathi. Ukuhlwaya izinto ezifanele nokuqinisekisa ukuthi konke kuhlangana kahle ngokuya ngezidingo zakho, ubuchwepheshe bethu obuyisisekelo.
Idizayini, ubunjiniyela, ukwenza prototyping, ukuphrintwa kwebhodi yesekethe ephrintiwe (PCBA), ukwethulwa komkhiqizo omusha (izinsizakalo ze-NPI), izixazululo zokuthengwa kwempahla ehlakaniphile, ukuphathwa kwempahla yengqondo… Sinikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene kumakhasimende ethu.
Amandla ethu obuchwepheshe, kuhlanganiswe nenethiwekhi yethu esiyithandayo yabaphakeli abaqeqeshiwe, kusenza sibe nguzakwethu wokuthola isixazululo esisebenza kahle sokuma okukodwa kusuka ekuqhubekeni kuze kube sekukhiqizweni nasekuxazululeni izixazululo zomjikelezo womkhiqizo wokugcina.
Umhlinzeki wesevisi yokukhiqiza ngogesi we-Consumer Electronics, amakhono ethu afaka:
• Amadivayisi womsindo nezinhlelo
• Imishini yezokwelapha yabathengi
• Amadivayisi we-Multimedia nemishini
• Ubuchwepheshe bezemfundo